Puntlnad oo ka xun heshiis ay gashay dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa ka carooday kana horyimid heshiis ay dowladda federaalka Soomaaliya la gashay Shirkad la yiraahdo Sheel oo shidaal ka doonaysa Somalia gaar ahaan Puntland heshiiskaas ayaana ka dhacay wadanka Netherland.
Agaasimaha macdanta iyo shidaalka Puntland Ciise Maxamuud Faarax Dhoola ayaa ku andacooday in wax laga xumaado ay atahay in dowladda federaalka Soomaaliya heshiis shidaal la gasho Shirkado shisheeyo, wuxuna muujiyay inaysan raali ka ahayn howlaha ay wado dowladdu.
“Waxaa jira heshiis ay dowladda faderaalka la gashay shirkadaha Shell iyo EXON, waxaana jira inay shirkaduhu doonayan inay dib u howl billaabaan si dhaqso ah, balse mowqifka Puntland wuxuu yahay inaysan aqbali doonin heshiiska, waxaana idiin caddeynayaa inaysan Puntland aqbalayn shirkad deegaannadeeda ka barta shidaal” ayuu yiri Ciise Maxamuud Faarax Dhoola.
Dhoolawaa ayaa ku dooday Puntland inay awood u leedahay inay lasoo baxdo shidaalkeeda iyadoo aan cidna kala tashan.
Waxa uu sheegay inuu wax ka khuseeyo wada hadalka DF iyo Shirkada Shell sidaasi darteedna aysan raali ka ahayn xiriir kasta oo DF lasoo samayso Shirkadaha doonaya arrimaha Shidaalka ee Soomaaliya.
Puntland waxay sheegtay inaysan dowladdu wax la tashi ah kala sameyn heshiiska, wuxuuna intaa ku daray inay doonayan shidaal laga baaro deegaannada laakiinse shidaalka in lagu baari karo qorsho ay Puntland wax ka ogtahay.
“Maamulka Puntland ma aqbali doono shirkadaha shidaalka ee dowladda dhexe ay heshiiska la gashay, waayo wax tallo ah nagalama siin, heshiiska waa mid aanay Puntalnd aqbali doonto,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Maamulka Puntland oo iska dhiga mararka sida dowlad madax banaan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka xanibtay in shirkadaha shidaalku toos ula macaamilaan, taasoo sida muuqata maamulkan uu ka carooday.
Nuur Cadde oo muddo dheer kadib ku laabtay Muqdisho